मैले कट्टु होइन, पाइन्ट लगाएकी थिएँ
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अमेरिका भ्रमणमा रहँदा उनका केही तस्बिर इन्टरनेटमा भाइरल भए । तीमध्ये प्रधानमन्त्रीकी जनसम्पर्क सल्लाहकार मृदुला कोइरालासमेत देखिएको तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा ठूलै प्रतिक्रिया सिर्जना गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधिहरूसित गम्भीर वार्ता गरिरहेका...
२१ अौँ शताब्दीमा ‘भर्जिन’ खोज्नु मुर्खता हो
अचेल के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ? गीतको प्रमोसन अनि आफ्नै अर्को गीतको तयारीमा छु । म्युजिकमा लाग्ने श्रेय कहाँबाट मिल्यो ? साकिराको ठूलो फ्यान हुँ, उनीबाटै प्रभाबित छु । कम्मर हल्लाउन सिपालु हुनुहुँदोरहेछ नि...
मैले गल्ती गरेको भए जेल हालेको भए हुन्थ्यो
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता कर्ण थापालाई पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ । उहाँले आफूलाई फिर्ता बोलाइएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ? यसै विषयमा हामीले साक्षात्कार गरेका छौं । पार्टीले उद्योगमन्त्रीबाट फिर्ता...
अख्तियार पारदर्शी भएन भने धेरै कर्मचारी आत्महत्या गर्न वाध्य हुन्छन्
हरेकवर्ष निजामति सेवा दिवस मनाउँदै आउनुभएको छ । यो वर्ष निजामति दिवस कसरी मनाउनुभयो ? हामीले २०६१ सालदेखि निजामति सेवा दिवस मनाउँदै आएका छौँ । ०६२ सालमा प्रजातन्त्रमाथि अतिक्रमण भयो । हामीले त्यसरी प्रजातन्त्रमाथि...
एमाओवादीमा पद, पैसा र सुविधामुखी प्रवृत्ति बढेको छ
भदौ २१ गतेभित्र विवादित विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना सकिँदै गएको हो ? केही समयअघिसम्म माघ ८ गते नै संविधान आउने योजनासहित हामी काम गर्दै थियौं । तर, केही समययता जुनप्रकारका गतिविधिहरू भइराखेका छन्, त्यसले...
जनताको दबाब नभए माघ ८ मा संविधान आउँदैन
नेकपा एमालेको भर्खरै सम्पन्न नवौं महाधिवेशनपछिको अवस्थालाई तपाइँले कसरी लिनुभएको छ ? महाधिवेशन केही समय पहिला मात्र सम्पन्न भए पनि स्थायी समिति, पोलिट्व्युरो निर्माण गर्न अझै बाँकी छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजनको काम...
रात विताउन अफर गर्नेहरु धेरै छन्
मानिसलाई धेरैथरिका रुचिहरु हुन्छन् । कोही चलचित्र क्षेत्रको स्टार बन्ने सोंचमा त कोही संसारले चिन्ने व्यक्ति बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा हुन्छन् । तर कतिका ती सपनाहरु पुरा पनि हुन्छन् त कतिका त्यसै ओइलिएर...
माधव नेपाललाई सम्मानजनक स्थान दिन केपी ओली तयार हुनुहुन्छ
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनपछिको अवस्थालाई तपाइँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? नवौं महाधिवेशन ऐतिहासिकरुपले सम्पन्न भयो । हामीले पार्टीको नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीको तर्फबाट एउटा नयाँ विचार ल्याएका छौं...
अरु गुण्डा पनि निगरानीमा छन
महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख पुष्कर कार्कीसँग चरी मारिएको घटनाबारे गरिएको कुराकानी: दिनेश अधिकारीको घटना के हो? यसभन्दा अगाडि घटनाबारे प्रहरीबाट जे सार्वजनिक भएका छन्, त्यही हो। भन्नाले? आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय व्यक्तिहरू उपत्यकामा सक्रिय...
लुकीलुकी दूतावास धाउने संस्कारले हामी कमजोर भयौँ
लामो समय राजदुतका रुपमा तपाईले भारतमा रहेर काम गर्नुभयो । त्यो सँगै तपाई अमेरिकालगायतका देशमा पनि राजदुतकै रुपमा रहेर कुटनीतिका क्षेत्रमा निक्कै लामो अनुभव बटुल्नु भएको छ । तपाईले भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले...
लमजुङका लोकप्रिय प्रतिनिधि
लमजुङको १ नम्बर क्षेत्र नेपाली कांग्रेसको प्रमुख आधार क्षेत्र मानिथ्यो । हुन पनि २०६४ सालको अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने अहिलेसम्मका हरेक चुनावमा कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित हुनुपरेको थिएन यस क्षेत्रबाट । तर, १२ वर्षमा...
केटाहरु लाइनमा छन्
कमल दाहाल निर्देशित चलचित्र ‘झेली’बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेकी नायिका सुरबिना कार्की म्युजिक भिडियोमा व्यस्त मोडल मानिन्छिन् । पहिलो चलचित्रबाटै प्रशंसा बटुल्न सफल सुरबिनाले ‘झेली’मार्फत सेक्सी हिरोइनको छवि बनाइन् । ठूलो पर्दाको चलत्रिमा अभिनय...